Google Ads Audit : Thola Ukuhlaziywa Kwezikhangiso zeGoogle Mahhala
Thola okokugcina ukuphuma emikhankasweni ads Clever Google Ads Audit
Thuthukisa ukusebenza komkhankaso wakho wezikhangiso Google Ads ngokuncane.
Cwaninga imikhankaso yami Google Ads mahhala manje
Linganisela imikhankaso yakho Google Ads ngomzuzwana nje.
Ngokuphazima kweso. Clever Audit imaka imikhankaso yakho ye- Google Ads . Manje njengoba usunendawo yokuqala, setha inhloso.
Ulwazi oludingayo. Futhi indlela yokuyisebenzisa.
Clever Audit iphakamisa ukuthuthuka kokuthuthukisa ukusebenza kwemikhankaso yakho Google Ads ngamathiphu nezincomo ezilungele ukusetshenziswa. Lezi zeluleko zihlelwe ngokuya ngomthelela wazo ongaba khona ekusebenzeni kwakho.
Sebenzisa ngcono okukodwa.
Clever Audit yenzelwe ngqo ukuze ngamunye usebenzise amathiphu akuthakazelisa ngempela. Sebenzisa kuphela lezo ozifunayo. Ngokuchofoza okukodwa.
Thuthukisa imikhankaso yakho. Zibekele imigomo emisha.
Bheka imikhankaso yakho Google Ads njalo ukuze ubone ukuthi yimaphi amathiphu we- Clever Audit akusiza uthuthukise ukusebenza kwakho. Uze ufinyelele enhlosweni yakho.
Lungiselela imikhankaso yakho Google Ads noma yikuphi.
Sebenzisa Clever Audit ehhovisi, usohambeni, noma olwandle. Lokhu Google Ads zeGoogle kuklanyelwe ukubonisa kahle kumadivayisi weselula namathebulethi. Google Ads ukusebenza kwezikhangiso zakho ze- Google Ads ngomunwe wakho nje.
Kala imikhankaso wakho ukhulise izinzuzo zakho.
Uma usufinyelele ekusebenzeni okukhulu kwemikhankaso Google Ads , sekuyisikhathi sokukala, ukukhulisa nokwakha imikhankaso eminingi ukufinyelela izethameli ezintsha. Konke kulawulwa Clever Audit.
sici kwethu okuhle? Abasebenzisi bethu.
Clever Ads , akukho okubalulekile kithi ngaphezu kwabasebenzisi bethu namakhasimende. Bona ukuthi bathini:
"Leli thuluzi le- Google Ads Audit kulula ukuliqonda futhi ulisebenzise. Futhi, ngingafaka izinguquko ngqo kusuka kudeshibhodi engisindisa amahora amaningi omsebenzi. Ithuthukise i-ROAS yami ngokucacile!"
"Nginebhizinisi lezingubo elincane edolobheni lami, futhi ukuthengiswa kwami Google Ads zeGoogle kuye kwanda kakhulu njengoba sengikusebenzisa kahle ngezikhangiso Clever Ads . Manje sengiyazi ukuthi yini engasebenzi kumasu wami Google Ads zeGoogle futhi ngikwazi ukuthatha isinyathelo kalula."
"Clever Ads zihlaziye imikhankaso yami Google Ads zeGoogle ngokushesha futhi mahhala! Engikuthanda kakhulu ukuthi ngikwazi ukunquma kalula ukuthi iziphi izikhangiso ezinenzuzo enkulu, kungivumela ukuthi ngikwazi ukuphatha kangcono umholo wami."
Qala ukuthuthukisa imikhankaso yakho Google Ads
Thola FREE audit manje
Thina obakhathalelayo uvikeleke idatha. Hlola Inqubomgomo yobumfihlo.
Okuningi Clever Ads Audit
Funda kabanzi ngethuluzi elizokusiza Google Ads imikhankaso yakho Google Ads
Ukuvuselelwa Google Ads Audit okwenziwe kabusha yi- Clever Ads kuzokukhombisa ukuthi umi kuphi nokuthi ukude kangakanani ukuba nemikhankaso eyenziwe kahle yezikhangiso ze-Google. Sizokwenza ngokushesha ukuhlaziywa okuphelele kwezikhangiso ze-Google ngemikhankaso yakho, bese sikutshele ukuthi yini okudingeka uyenze ukuze uthole imiphumela engcono.
Gcina isikhathi nemali
Clever Ads Audit ihlose ukukusiza wonge imali ngokukwazisa uma uchitha imali eningi kwamanye amagama angukhiye, ukukhomba kwakho akulungiswanga, isilinganiso sakho sekhwalithi asisihle, noma ukulandelela kwakho ukuguqulwa akusebenzi kwezinye izindaba eziningi.
Izokusiza nokuthi ukhombe amathuba futhi uphakamise ukuthi ungeze amagama angukhiye amasha aguqula kakhulu, uthuthukise okubekiwe, wakhe izinhlobo ezintsha zomkhankaso, noma uqedele ads zakho ngezandiso eziningi. Misa ukuchitha amahora wesikhathi sakho ubuyekeza imikhankaso yakho namaqembu ezikhangiso ukuze uthole leyo miphumela engcono. Zibekele umgomo bese sizokutshela ukuthi ungafika kanjani lapho.
Bahole nje okukodwa
I- Google Ads Audit ikuvumela ukuthi usebenzise zonke iziphakamiso ngokuzenzakalela ngokuchofoza nje. Uzokwazi ukukhulisa futhi wehlise amabhidi, udale imikhankaso emisha, izikhangiso nezandiso zesikhangiso, futhi ubuyekeze ukuqondisa kwakho. Konke ngaphandle kokufaka i-Google Ads interface, ngqo kusuka kudeshibhodi yethu Google Ads Audit .
imikhuba ehamba phambili
Ungakusebenzisa kanjani kakhulu Clever Ads Audit
Ukuhlaziywa kwethu Google Ads zeGoogle kungahle kube ngumngane wakho omusha wezikhangiso. Thatha leli Google Ads esikhwameni sakho ukuze imikhankaso yakho ihlale ilawulwa. Njengoba wazi, Google Ads akuwona umsebenzi wesikhathi esisodwa, kufanele wakhe inqubo ejikelezayo futhi uhlale ubheke ukusebenza kwemikhankaso yakho. IGoogle incoma ukwenza ukujula Google Ads zeGoogle okungenani kanye noma kabili ngenyanga.
Kumele-do nokwenza nyangazonke
Nge- Google Ads Audit yethu enamandla, ngeke uze udinge ukukhumbula ukwenza njalo. Sizokukhumbuza ukuthi wenze ukuhlaziywa kwezikhangiso zeGoogle ngezikhathi ezithile, ngakho-ke okumele ukwenze nje ukufaka ipulatifomu bese wenza ukuhlaziywa okusha kwezikhangiso zeGoogle ngokuchofoza okukodwa. Ngemuva kwalokho uzothola uhlu oluphelele lwamathiphu neziphakamiso zezikhangiso ze-Google ezihlelwe ngokuya ngomthelela ezingaba nawo kumikhankaso yakho. Sincoma ukuthi ubuyekeze amathiphu anomthelela ophezulu kuqala, bese uma ususebenzise lawo owathandayo, hamba lawo aphakathi nendawo nalawo aphansi.
Kukhadi ngalinye lethiphu, uzothola isincomo esichaziwe esinwetshiwe mayelana naso ukuze uthuthukise imikhankaso yakho ngenkathi ufunda kabanzi ngesihloko. Sifuna ukukuqondisa ngenkathi Google Ads zeGoogle. Amathiphu amaningi alungele ukusetshenziswa okusho ukuthi uzokwazi ukuwasebenzisa ngokuchofoza nje inkinobho.
Ngokuzayo lapho wenza i- Google Ads Audit ngeke ube namathiphu amasha wokuqhubeka nokwenza ngcono imikhankaso yakho, kodwa uzokwazi nokuhlola ukuqhubeka kwakho uma kuqhathaniswa nocwaningomabhuku oludlule ukuze wazi umthelela amathiphu asetshenzisiwe nginemikhankaso yakho.
Ukwenza kahle imikhankaso yakho Google Ads kudinga isikhathi nesineke, kepha akusenjalo uma unale- Google Ads Audit njengomlingani wakho ebulelesi. Isikhathi yimali - yingakho sikusiza ukuthi ukhulise inani lesikhathi sakho kanye nembuyiselo kuyo yonke idola lesikhangiso olichithile.
Kungani usebenzise Clever Ads Audit?
Clever Ads siyaziqhenya ngozakwethu beNdunankulu yakwaGoogle, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi yonke inqubo iphephile futhi ivikelekile ngo-100%, nokuthi sihlonipha ubumfihlo bakho. Sesivele sisize amabhizinisi angaphezu kwe-100,000 ukukhulisa isu lawo Google Ads nokusebenza ngemiphumela emihle.
Siguqule into enzima futhi edla isikhathi, yaba yinto esheshayo, elula, futhi engalokothi ithi sizijabulise. Uzokwazi “ukudlala” ngamathiphu njengokungathi bekungumdlalo, ukuze ukwazi ukufinyelela amaphuzu aphezulu - ne-ROI - ngaphambi kokuthi uqaphele. Konke ngenkathi ufunda kabanzi ukuze ube ngumphathi webhizinisi ohlakaniphile futhi onolwazi oluningi kunqubo. Ngezikhangiso Clever Ads , uzohlala wazi ukuthi yini okufanele uyenze ngokulandelayo njengoba ungathembela kithi ukuze uthole usizo ngezinyathelo zakho ezilandelayo.
Umbono wethu ukuthi noma yiliphi ibhizinisi lanoma yisiphi isayizi nebhajethi kufanele likwazi ukufinyelela ukukhangisa ku-Google. Kungakho sithuthukise lokhu kucwaninga kwamahhala Google Ads Audit kwamabhizinisi amancane ukuze akwazi ukuncintisana ngokulingana nabadlali abakhulu ngesabelomali esibanzi sokumaketha. Akukhathalekile ukuthi kungani ufuna ukuhlola imikhankaso yakho: noma ngabe usola ukuthi imikhankaso yakho yezikhangiso zeGoogle ingenza kangcono, noma ufuna ukubheka ukuthi ngabe inkampani yakho yezentengiso yenza umsebenzi wayo omuhle yini, noma ngabe ufuna ukwazi nje mayelana nokuthi ukusebenza kwakho kanzima kunomvuzo, Clever Ads lakho.
Ngaphezu kwalokho, ithimba lethu ochwepheshe uhlale ekulungele ukukusiza, futhi ungahlala ukubathinta nganoma yimiphi imibuzo, ukukhathazeka, isiphakamiso, noma usizo kungase kudingeke ngezinyehi@cleverads.com
Enye inzuzo yokusebenzisa i- Clever Ads Audit ukuthi ungafinyelela eminye imikhiqizo eminingi kudeshibhodi Clever Ads , ukuze ukwazi ukuhlanganisa amandla we- Google Ads Audit namanye amathuluzi azokusiza udale ngokuzenzakalela izinhlobo ezintsha zemikhankaso yezikhangiso ze-Google, udalele ama-banner amasha ibhizinisi, noma thola imibono emisha yamagama asemqoka phakathi kwezinye izinto. Amathuluzi wethu wezinto zonke in-one zamathuluzi ezikhangiso ze-Google alungele ukwenza wonke umsebenzi ngenkathi ubeka isikhathi sakho kulokho okwazi ukukwenza, ukuqhuba nokuphatha ibhizinisi lakho.
Thina obakhathalelayo uvikeleke idatha. HlolaInqubomgomo yobumfihlo.
Sizokucela ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho Google Ads ukuze uyicubungule futhi uyihlole ukuze sikunikeze amathiphu enziwe waba Google Ads wokuzuza kakhulu emikhankasweni yakho. Sibheka ubumfihlo bedatha ngokungathi sína futhi siqoqa kuphela esikudingayo ukukunikeza ulwazi oluhle kakhulu.